ဂက်(စ်)မီးဖိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မျက်နှာဒဏ်ရာ ရရှိသွားတဲ့ တေးသံရှင်မင်းသမီး ယွန်းမြတ်အိမ်ကို ဆေးဖိုးသွားလှူပေးခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရဲ့ ဗီဒီယို - TGI Daily News
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်လူရွှင်တော် ​ငြိမ်းချမ်း ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အငြိမ့်သဘင်ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ဟာသလူရွှင်တော် တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သရုပ်ဆောင်နယ်ပယ်ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အချိန်ကာလလေးမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းက မြန်မာန်ိုင်ငံလူရွှင်တော်အသင်း စာရင်းစစ်-ချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့ နာယကအဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို ငွေကြေးအပြင် စားသောက်စရာတွေကို အလှူရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းကဂက်(စ်)မီးဖိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မျက်နှာဒဏ်ရာ ရရှိသွားတဲ့ တေးသံရှင်မင်းသမီး ယွန်းမြတ်အိမ်ကို ဆေးဖိုးသွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အလှူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ​​ငြိမ်းချမ်းက “တေးသံရှင်မင်းသမီးလေး ယွန်းမြတ်အိမ် (ဝါဝါ) ဂက်(စ်)မီးဖိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မျက်နှာဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံလူရွှင်တော်အသင်း(ရန်ကုန်)ဥက္ကဌ-ချွန်တွန်း ပရဟိတအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်- ဗွီဒီယ်ိုရုပ်ရှင်ဟာသမင်းသား ဒိန်းဒေါင်မှ ဆေးဝါးကုသရန်ကူညီလှုဒါန်းငွေ ၅သောင်း မြန်မာန်ိုင်ငံလူရွှင်တော်အသင်း စာရင်းစစ်-ချွန်တွန်းပရဟိတအဖွဲ့ နာယက လူရွှင်တော် ဦးငြိမ်းချမ်းမှ ၅သောင်း ကူညီလှုဒါန်းပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ဒိန်းဒေါင် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းကို လည်း ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေးလိုက်ပါဦးနော် ။
Video Credit & Source – Nyein Chan
ဂကျ(ဈ)မီးဖိုပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ မကျြနှာဒဏျရာ ရရှိသှားတဲ့ တေးသံရှငျမငျးသမီး ယှနျးမွတျအိမျကို ဆေးဖိုးသှားလှူပေးခဲ့တဲ့ ငွိမျးခမျြး ရဲ့ ဗီဒီယို
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျလူရှငျတျော ​ငွိမျးခမျြး ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာနဲ့ လြှောကျလှမျးလာခဲ့တဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ အငွိမျ့သဘငျဖြျောဖွပှေဲတှမှော ဟာသလူရှငျတျော တဈယောကျအဖွဈ လူသိမြားခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ သရုပျဆောငျနယျပယျထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျတိုကျလုပျကိုငျနပွေီး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ရရှိနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ။
လတျတလော ကပျရောဂါတိုကျဖကျြရေး အခြိနျကာလလေးမှာလညျး ငွိမျးခမျြးက မွနျမာနျိုငျငံလူရှငျတျောအသငျး စာရငျးစဈ-ခြှနျတှနျးပရဟိတအဖှဲ့ နာယကအဖွဈ လုပျကိုငျပေးနတောဖွဈပါတယျ။ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ သူတှကေို ငှကွေေးအပွငျ စားသောကျစရာတှကေို အလှူရှငျတှနေဲ့ စုပေါငျးပွီး လှူဒါနျးပေးတာဖွဈပါတယျ။ ယခုမှာလညျး ငွိမျးခမျြးကဂကျ(ဈ)မီးဖိုပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ မကျြနှာဒဏျရာ ရရှိသှားတဲ့ တေးသံရှငျမငျးသမီး ယှနျးမွတျအိမျကို ဆေးဖိုးသှားရောကျလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးပဲဖွဈပါတယျ။
အလှူလေးနဲ့ပတျသကျပွီး ​​ငွိမျးခမျြးက “တေးသံရှငျမငျးသမီးလေး ယှနျးမွတျအိမျ (ဝါဝါ) ဂကျ(ဈ)မီးဖိုပေါကျကှဲမှုကွောငျ့မကျြနှာဒဏျရာရရှိသှားပါတယျ…. မွနျမာနိုငျငံလူရှငျတျောအသငျး(ရနျကုနျ)ဥက်ကဌ-ခြှနျတှနျး ပရဟိတအဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ- ဗှီဒီယျိုရုပျရှငျဟာသမငျးသား ဒိနျးဒေါငျမှ ဆေးဝါးကုသရနျကူညီလှုဒါနျးငှေ ၅သောငျး မွနျမာနျိုငျငံလူရှငျတျောအသငျး စာရငျးစဈ-ခြှနျတှနျးပရဟိတအဖှဲ့ နာယက လူရှငျတျော ဦးငွိမျးခမျြးမှ ၅သောငျး ကူညီလှုဒါနျးပါတယျ” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဒိနျးဒေါငျ နဲ့ ငွိမျးခမျြးကို လညျး ဆုမှနျကောငျးလေး တောငျးပေးလိုကျပါဦးနျော ။